Umhla My Pet » 10 Okokuqala ethungwayo Tips Umhla for Men
Siye bonke ndadibana nabantu xa ujonge konke okusemandleni ethu. Siye sadibana abamelwane ezintsha xa kukucheba ingca. Siye sadibana naye omtsha ngosuku xa ivuza coffee kwi ihempe yethu. Njengoko isitsho njalo, sifumana kuphela elinye ithuba lokwenza umbono wokuqala. Siza, nokuba, ubone abamelwane bethu kunye nabo mhlawumbi ngaphezu sifuna. Umhla yahlukile. Ekuqaleni, akukho siqinisekiso sokuba uza kufumana ithuba lokuba omnye umhla. Isibini, yena uya ukunyamekela kakhulu ngokugqithiseleyo ngenkangeleko yakho ngaphezu ummelwane wakho okanye ufunda naye. Ungaxhalabi, nangona. Ndiza apha ukunceda 10 Okokuqala ethungwayo Tips Umhla for Men.
1. Dress inqanaba nohlobo lo mcimbi. Ukuba phantse wonke omnye umntu le venkile uya enxibe ibhatyi, akufunekanga ukubonisa ngaphandle eyodwa. Kulula kakhulu ukuba banxibe phantsi kubhabho kunokuba banxibe Ukuba uzufumana urholela underdressed.
2. Nxiba ukulungelana imozulu. Masithi kufuneka izicwangciso idinala emva kwesidlo usuku lwakho ucebisa ukuba umntu ehamba esihla ngesitrato elimnandi. Ufuna ukuba ilungiswe.
3. Nxiba izihlangu intle! Akukho flops flip okanye izihlangu intenetya…ngaphandle kokuba kwi elunxwemeni okanye ukudlala intenetya. Abasetyhini ukuthanda izihlangu kwaye ziya kuqaphela kokwakho.
4. Iron isambatho sakho. Kusenokwenzeka uqaphele (okanye inkathalo) ukuba iihempe zethu kusonjululwa, kodwa yena uya kuphinda isaziso (kunye nokhathalelo).
5. Nxiba into ucingisisa kakuhle. Le fit iingubo zakho ibaluleke ngaphezu brand, isimbo okanye nantoni na enye. Kwabo namlingayo ukunxiba shirt super tight…musa…ukwenza nje…
6. Nxiba into zisetyenziswa yaye bekhululekile. Ingakumbi xa unengxaki novalo ngomhla wokuqala, uzinike into enye ngaphantsi moss.
7. Nxiba ibhanti kwaye uqiniseke iyavumelana iimbadada zakho. Oku kwenza isinxibo sakho khangela epheleleyo.
8. Fumana ingxelo. Buza uyasidinga, umhlobo, naye okanye umntu omthembayo malunga ngubo. Akuyomfuneko ukuba ukubavumela ubhinqiswe, kodwa becela ukuba ujonga Kulungile ngamana luncedo.
9. Musa banxibe nantoni ngokugqithisileyo kakhulu okanye neekepusi. Akuyomfuneko ukuba umele unxibe ngathi utatomkhulu wakho, kodwa awufuni iingubo zenu ukuba ukuphazamiseka. Kodwa kwangaxeshanye…
10. Yiba nguwe! Women abathanda ithemba. Nxiba into oluvakalisa ubuntu bakho.